လာရောက်လည်ပတ်ကြသော မိတ်ဆွေများအား ကြိုဆိုပါတယ်
ဦးသန်းရွှေနဲ့သူ့ မိသားစုကို လုပ်ကြံကြရမည်..
တိုင်းပြည်ကို ဦးသန်းရွှေနှင့် သူ့ မိသားစု အပိုင်စီးထားသည်..
ဦးသန်းရွှေဟာ သူရဲ့လုပ်ရပ်တွေ ပိုမိုပီပြင်လာသည့်အပြင် သား သုံးသား စီမံကိန်းသည်လည်း ပေါ်ပေါက်လာပါပြီ.. တပ်မတော်ရဲ့ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ပြီး အသက် ၆၀ ကျော်ပြီး သေခါနီးအထိ တပ်မတော်ကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တာဝန်လွှဲမပေးသေးခြင်း.. ပြည်သူ့ အာဏာကို ပြည်သူ့ လက်ထဲ မလွှဲပေးခြင်း.. မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသား အများအပြား ကိုးကွယ်လျှက်ရှိသော ဗုဒ္ဓဘာသာအား အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းခြင်း.. ပြည်သူများနှင့် တပ်မတော်ကြား ညှိနှိုင်းမရအောင် သွေးခွဲရန်တိုက်ပေးနေခြင်း များပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယနေ့သူ၏ လုပ်ရပ်များအတွက် ပြန်လည်ပေးဆပ်ရတော့မည့်အချိန်တွင် ကျန်ရှိနေသေးသည့် သက်တမ်းအတွက် အာဏာကိုဖက်ပြီး သေနိုင်ဖို့ အတွက် နောက်ထပ် ဇာတ်လမ်းတပုဒ်ကို ထပ်မံခင်းကျင်းလာနေပြီဖြစ်ပါသည်.. ထို့ ကြောင့် ဥပဒေအရ တရားဝင်စစ်မှန်မှုမရှိသော ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဆွေးနွေးအဖြေရှာမှုများသည် ကိုယ်ကိုတိုင် ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်.. တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို မှားသည် မှန်သည် တွေးနေခြင်းထက် မိမိတို့ ရဲ့တပ်မတော်၏ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ထားသူ အဖြစ်သေချာမြင်တတ်ပါက တပ်မတော်အပေါ် သစ္စာစောင့်သိခြင်း တပ်မတော်၏ အသက်ဖြစ်သည့် တပ်မတော်ဥပဒေများကို ကာကွယ်ခြင်းမည် ပါလိမ့်မည်...
ဘဘဦးတင်ဦး မတရားထိန်းသိမ်းခြင်းခံထားရာမှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဒီပဲရင်းအပေါ် ခွင့်လွှတ်ကြောင်း နအဖအပေါ် ပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာပြန်ပါတယ်.. ကျနော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်.. ကျနော်တို့မှာ ပြည်တွင်းကခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လမ်းအတိုင်းတသွေမတိမ်း လိုက်ခဲ့ပါတယ်.. လိုက်ချင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့လုပ်နေရတာတွေက အခုလိုသိလိုက်ရတော့ အလကားဖြစ်ဖြစ်သွားပါတယ်.. ထားလိုက်ပါတော့.. ဘာတွေပြောဆိုထားတာတွေ ရှိအုံးမလဲမသိတော့.. လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းဆို အန်အယ်ဒီက ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းအပေါ် မားမားမတ်မတ်ရပ်လိုက်ပြီ.. ဦးသန်းရွှေကလည်း သူ့သားသမီးတွေ အပေါင်းအပါတွေ အဲလူတွေရဲ့မိသားစုတွေ လက်ထဲကို နိုင်ငံပိုင်တွေကို ပြည်သူပိုင်လွဲတယ်ဆိုပြီး အရပ်ဝတ်တွေကို အကုန်လုံးတရားဝင်လွဲနေပြီ.. သူတို့လိုချင်တဲ့ အခြေခံဥပဒေရှိပြီ.. သူတို့အတွက် တနိုင်လုံးက စီးပွားရေးတွေရထားပြီ.. တနည်းအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးမူနဲ့ စီးပွားရေးရထားပြီ.. အဲတော့ ၂၀၁၀ ဘာဖြစ်ဖြစ် သူတို့အတွက်ပဲ.. လွှတ်တော်ကို ငွေနဲ့ဝယ်ပြီ(ဒီသဘောကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်).. ဘယ်ပါတီတတ်တတ် ဘာမှမထူးတော့ဘူး.. အဲဒီမှာ အန်အယ်ဒီက ပြဿနာရှိပါတယ်.. ဦးသန်းရွှေက ငြိမ်နေပြီ.. တနည်းအားဖြင့် ငြိမ်ငြိမ်လေးနေနေပြီ.. အန်အယ်ဒီက တင်းခံနေသမျှ အန်အယ်ဒီနဲ့ ရွှေးကောက်ပွဲဝင်ချင်သူများအကြား ပြဿနာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်.. ပြည်သူနဲ့ ပြန်တိုက်ပေးမယ့်အနေအထား.. နအဖ ဆင်းလည်း သူ့လူပဲ.. မဆင်းလည်း သူ့လူပဲ.. သူတို့က စင်ပေါ်က.. အတွေးနှစ်ခြမ်းဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေက ခွာပြဲမယ်.. အန်အယ်ဒီရဲ့ ရပ်တည်ချက်အတိုင်း ထောက်ခံသူတွေပိုများရင်လည်း ၂၀၁၀ ပျက်ပြီး သူတို့က ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်.. ရွှေးကောက်ပွဲဝင်ချင်သူတွေပိုများလည်း လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ.. သူတို့က တရားဝင်ဖြစ်သွားမယ်.. စီးပွားရေးတွေ သူတို့လက်ထဲမှာရှိတယ်.. ဘယ်တတ်တဲ့အစိုးရကမှလာထိမရဘူး.. ကျနော်တို့ ဒီမိုကရေစီလိုချင်တာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတောဆိုတဲ့ စာတမ်းတပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူး.. အဲဒီရဲ့ စံတွေလိုချင်တာ.. အဲဒီက စံတွေဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်တာနဲ့ သိတဲ့ကိစ္စပါ.. ဥပမာ.. ဦးသန်းရွှေ ရဲ့ချမ်းသာမှုဟာ သံသယ ဆိုတာထက်ကို တိကျလွန်းတာမို့ သူ့နဲ့ သူ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြည်ထဲရေးက ထိန်းချုပ်စစ်ဆေးရမှာပါ.. ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း သူအဖမ်းခံရဖို့ရှိပါတယ်.. ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပါ.. ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်မနိုင် တွေးကြည့်ရုံနဲ့ မရဘူးဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်.. ဒါဆိုရင် ဘယ်မလဲဒီမိုကရေစီ.. သူတို့မိသားစု အပေါင်းအပါသီးသန့်တော့ လုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်နိုင်ပါဘူး.. အဲတော့ ဘယ်ဘက်ကစဉ်းစားစဉ်းစား ပြည်သူကောင်းစားဖို့ စစ်မှန်တဲ့ တရားဥပဒေမှန်မှန်ကန်ကန် စိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာဟာ အခြေခံဥပဒေမှာထဲက ပြဿနာရှိနေပါပြီ.. ဒါနဲ့တောင် အခြေခံဥပဒေနဲ့ပက်သက်တာတွေကို ကျော်ပြီး တရားခံဖြစ်ရမယ့် နောက်တတ်မယ့်အစိုးရနေရာအတွက် ပြိုင်ချင်ကြသူတွေကိုတော့ ကျော်သူပြောတဲ့ ပြိုင်မယ်ဆိုကတည်းက ရှုံးနေပြီဆိုတာ သတိထားဖို့လိုပါတယ်.. နိဂုံးချုပ်ပြောရရင်တော့ ဘာတွေဖြစ်ဖြစ် ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်းကို ထောက်ခံတယ်.. အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ရမယ်.. ဒါကိုမပြင်ပဲ အစိုးရတတ်လုပ်မယ့်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုလည်း ရှုံ့ချတယ်.. တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကို ဦးသန်းရွှေ ကျောထောက်နောက်ခံရှိလို့ ရထားတဲ့ စီးပွားရေးသမားယောင်ယောင်ကောင် တေဇလိုလူမျိုး လက်ထဲကပြန်ယူရမယ်.. သူတို့ရသွားတယ်ဆိုရင် ဓမ္မာဓိဌာန်မကျဘူး။ သံဃာတွေကို သတ်၊ ထောင်ချ ၊ ပြည်သူတွေအပေါ်အနှစ်နှစ်အလလ ဘ၀တွေဖျက်ခဲ့တဲ့ သူတွေနောက်ဆုံးမှာ ချမ်းသာသုခနဲ့ ပြည့်စုံသွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ခွင့်လွှတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကြိုတင်အသိပေးချင်ပါတယ်..
Posted by သင့်ကင်း at 8:47 AM
I would like to invite you all to come and listen to Myanmar Music at my site. I have many Myanmar Songs and Myanmar Mp3 collected on my site.
Myanmar Online Music: http://www.myanmaronlinemusic.com/
November 24, 2011 at 5:46 PM
မောင်းပြန်ကို ဒေါင်းအလံနဲ့တိုက်မည်
စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို လုပ်ကြံရန် သင်ရဲ့ ပူးပေါင်းမှုအားအလိုရှိသည်
ဗိုလ်သန်းရွှေ သို့ 
တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်ဆိုသူကြီး ဦးသန်းရွှေခင်ဗျာ.. စစ်တပ်က ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းယူပြီး ပြည်သူ့ လွှတ်တော်မရှိပဲ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး.. နိုင်ငံကြီးတခုလုံး အဆင့်အတန်းတွေမြင့်မားတိုးတတ်လာခဲ့တာ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှ မယှဉ်နိုင်အောင်ပါပဲ(သတင်းစာများတွင်).. ဘာလို့ များ အခုမှ တပ်မတော်က ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းယူဖို့ခက်ခက်ခဲခဲ ဆန္ဒခံယူပွဲလုပ်ရသလဲဆို ဖြေကြားပေးပါ..
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ။
ဦးသန်းရွှေမိသားစုအား ရသလို လုပ်ကြံရမည်
အွန်လိုင်း ဒုက္ခသည် ..().. ဦး ရောက်ရှိနေသည်